Muhaajiriin ay Soomaali ku jiraan oo Maxkamadeyn ku bilaabatay - Awdinle Online
Muhaajiriin ay Soomaali ku jiraan oo Maxkamadeyn ku bilaabatay
Maxkamad ku taalla Jasiirada Malta ayaa waxaa ay bilaawday Maxkamadeynta 18 Qof oo muhaajiriin ah, kuwaas oo la sheegay inay ku jiraan dad Soomaali ah, waxaana loo heystaa dambiyo kala duwan.
Warbaahinta Malta qaarkood ayaa tebiyay in dadkaasi loo heysto rabashado dhawaan ka dhacay Magaalada Halfar oo la sheegay inay ku baaba’day Hant farabadan oo ku kaceysay malaayiin Euro.
Raggaan Maxkamadeyntooda ay ka bilaabatay Jasiirada Malta ayaa waxaa la sheegay inay kasoo kala jeedaan dalalka kala ah, Soomaaliya, Mali, ivery Cost, Suudaan. Genia & Gambia, isla markaana dhamaantood ay qirteen dambiga lagu soo eedeeyay.
Qareenka u doodaya muhaajiriintaan la Maxkamadeynayo oo lagu Magacaabo Martin Fenech ayaa sheegay in raggaan aysan sameyn wax rabshado ah, balse kaliya ay banaanbaxeen, isla markaana aysan jirin hanta Banaanbaxooda ku baaba’day.
Ugu dambeyn Garsooraha Maxkamadda Malta Frendo Dimech ayaa sheegay in raggaan xukunkooda lagu qiimeyn doono cadadka inta ay la egtahay hantida ay khasaariyeen in kastoo waqtiga xukunka uusan si rasmi ah u shaacin.
Dalka Jasiirada Malta oo kamid ah dalalka Qaarada Yurub ayaa waxaa ku sugan Soomaali farabadan oo lagu soo dhaweeyay, hayeeshee dadka badi ay dalalka kale ee Qaarada Yrurb uga sii gudbaan.
Previous articleQoor Qoor oo Muqdisho ka wadda Qorshe uu ku dhex-dhaxaadinayo Dowladda & Mucaaradka
Next articleDowladda Somalia oo digiin kasoo saartay duufaan kusoo wajahan dalka